लकडाउन खुलेको दिन सवारी चाप हेर्दा हामी भारतको जस्तै बिकराल रुपको निम्ता दिदैछौ , कोरोनाप्रति आफैं सतर्क बनौं’ – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/लकडाउन खुलेको दिन सवारी चाप हेर्दा हामी भारतको जस्तै बिकराल रुपको निम्ता दिदैछौ , कोरोनाप्रति आफैं सतर्क बनौं’
तर कोरोना संक्रमणको जोखिम टरेको छैन । लकडाउन खुलेपछि संक्रमण फैलिएका देश धेरै छन् । नजिकको उदाहरण दक्षिणी छिमेकी देश भारत हो । त्यहाँ चार लाखभन्दा बढी मानिस संक्रमित र २८ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ ।
यो पनि सत्य हो कि, सधैं लकडाउन सम्भव हुन्न । कोरोना संक्रमणको समाधान लकडाउन मात्र पनि होइन । लकडाउन खुकुलो बनाउनु आवश्यक थियो, खुकुलो भयो । त्यसैले अहिले सरकारले लकडाउन किन खुकुलो बनायो भन्ने विषयमा बहस गर्नुभन्दा यति लामो लकडाउनमा सरकारले के गर्‍यो ? र, अब ढुक्क हुँदा हुन्छ ? भनेर बहस छलफल गर्नु जरुरी हुन्छ ।
सरकारसँग लकडाउन खुकुलो नबनाउनुको विकल्प थिएन । लकडाउन खुकुलो बनाएपछि सरकार र नागरिक दुबैको जिम्मेवारी बढेको छ ।